News - လျှပ်စစ်သံတူ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အသုံးပြုမှုတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သောကိစ္စရပ်များ
လျှပ်စစ်သံတူသည်အဓိကအားဖြင့်ကွန်ကရစ်၊ ကြမ်းခင်း၊ အုတ်နံရံများနှင့်ကျောက်တုံးများတွင်တူးဖော်ရန်အသုံးပြုသောလျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ multi-functional ဖြစ်စေလျှပ်စစ်တူများသည်သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ခန်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ တူ၊ တူ၊ ။
လျှပ်စစ်သံတူသည်ဂီယာပစ္စတင်၏ပစ္စတင်ဖြင့်ဖိအားပေးသောလေထုကိုဖိအားပေးသည်။ ဆလင်ဒါလေဖိအားသံသရာပြောင်းလဲမှုကတူရိယာရှိဆလင်ဒါကိုအုတ်၏ထိပ်သို့ထိုးနှက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အုတ်ကိုရိုက်နှက်သည်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်လည်ပတ်မှုနှင့်ရှေ့နှင့်နောက်သို့ရွေ့လျားခြင်းကဲ့သို့သောတူတူအပြင်များသောအားဖြင့်လျှပ်စစ်သံတူသည်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပါရှိပြီးအချို့သောလျှပ်စစ်သံတူကိုလည်းသက်ရောက်မှုရှိသောလျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းဟုခေါ်သည်။ လျှပ်စစ်တူသည် 30MM နှင့်အထက်ကဲ့သို့သောကြီးမားသောအချင်းအတွက်သင့်တော်သည်။
အလုပ်လုပ်သောနိယာမ - လျှပ်စစ်သံတူ၏နိယာမမှာဂီယာယန္တရားသည်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကိုလုပ်ရန်တွန်းအားကိုမောင်းစေသည်။ လျှပ်စစ်သံတူသည်ဂီယာပစ္စတင်၏ပစ္စတင်ဖြင့်ဖိအားပေးသောလေထုအားဖိအားပေးသည်။ ဆလင်ဒါ၏လေဖိအားသံသရာပြောင်းလဲမှုကတူရိယာရှိဆလင်ဒါကိုအုတ်၏ထိပ်နှင့်ဆန့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကအုတ်တစ်ချောင်းဖြင့်ရိုက်နှက်သကဲ့သို့၊ Brushless လျှပ်စစ်သံတူ!
တစ် ဦး သံတူအသုံးပြုတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု
၁။ အော်ပရေတာသည်သူတို့၏မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်မျက်မှန်တပ်ထားသင့်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အလုပ်လုပ်သောအခါအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုဝတ်ဆင်သင့်သည်။
၃။ ရေရှည်လည်ပတ်ပြီးနောက်လေ့ကျင့်ခန်းသည်လောင်သောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအစားထိုးလိုက်သောအခါအသားအရေကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုသတိပြုသင့်သည်။
4, စစ်ဆင်ရေးလက်ကို sprain ပြောင်းပြန်အင်အားသုံးပိတ်ဆို့ဖို့, နှစ် ဦး စလုံးလက်လည်ပတ်, ဘေးထွက်လက်ကိုင်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၁။ ဆိုက်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသော power supply သည်လျှပ်စစ်သံတူ၏ nameplate နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ။ ယိုစိမ့်ကာကွယ်မှုရှိမရှိ။
2. Drill bit နှင့် gripper ကိုသဟဇာတဖြစ်အောင်တပ်ဆင်သင့်သည်။
၃။ နံရံများ၊ မျက်နှာကြက်များနှင့်ကြမ်းပြင်များကိုတူးဖော်သည့်အခါမြှုပ်ထားသောကြိုးများသို့မဟုတ်ပိုက်များရှိမရှိကို ဦး စွာအတည်ပြုသင့်သည်။
4, စစ်ဆင်ရေး၏အမြင့်၌, သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို set up လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ, အောက်ပါအရာဝတ္ထုနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရန်။
၅။ တူတူခလုတ်ခလုတ်ပြတ်သည်ရှိမရှိအတည်ပြုပါ။ အကယ်၍ power switch ကိုဖွင့်ထားပါက power socket ထဲသို့ plug ကိုထည့်လိုက်သောအခါ power tool သည်မမျှော်လင့်ဘဲချက်ချင်းဖွင့်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
၆။ အလုပ်လုပ်သောနေရာသည် power supply နှင့်အဝေးကြီးနှင့် cable ကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ပါကလုံလောက်သောစွမ်းရည်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောတပ်ဆင်မှုရှိသည့် extension extension ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ အကယ်၍ တိုးချဲ့ထားသော cable သည်လူကူးမျဉ်းကျားကိုဖြတ်သန်းသွားပါက၎င်းကိုမြှင့်သင့်သည် (သို့) cable ကိုမကြေမွခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
1, "သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတူး" စစ်ဆင်ရေး
(1) သက်ရောက်မှု rotary အပေါက်၏အနေအထားမှအလုပ်လုပ် mode ကိုဖုဆွဲပါ။
(၂) လေ့ကျင့်ရန်နေရာသို့ drill bit ကိုထားပါ၊ ထို့နောက်အရှေ့ switch ခလုတ်ကိုဆွဲပါ။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်တွန်းအားပေးသည်, ဒါကြောင့် chip ကိုခက်ခဲတွန်းအားပေးဖိအားမပါဘဲ, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။
2, "စို့, နှိပ်စက်ခြင်း" စစ်ဆင်ရေး
(၁) Working mode knobs ကို“ single hammering” နေရာတွင်ဆွဲပါ။
3. "တူးဖော်ခြင်း" စစ်ဆင်ရေး
(၁) Working mode knobs ကို“ drilling” (no hammering) အနေအထားသို့ဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၂) တူးဖော်မည့်နေရာကို drill bit ကိုထားပါ၊ ပြီးနောက်ခလုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ရုံကအပေးအယူပေးပါ။
မှိုင်းသို့မဟုတ်ကွေးနေသော bit ကိုအသုံးပြုခြင်းကပုံမှန်မဟုတ်သောမော်တာ၏ Overload မျက်နှာပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွေ့ရှိပါကချက်ချင်းအစားထိုးသင့်သည်။
လျှပ်စစ်သံတူ၏လည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသက်ရောက်မှုများကြောင့်လျှပ်စစ်သံတူကိုယ်ထည်၏ mounting screw သည်လွတ်သွားရန်လွယ်ကူသည်။ စွဲစေအခြေအနေကိုမကြာခဏစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဝက်အူသည်လွတ်သွားလျှင်ချက်ချင်းထပ်မံတင်းကျပ်သင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကလျှပ်စစ်သံတူ၏ပျက်ကွက်မှုသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။
မော်တာပေါ်ရှိကာဗွန်ဖြီးသည်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း၏ wear degree ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါက motor သည်ပျက်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသောကာဗွန်ဖြီးကိုချက်ချင်းအစားထိုးသင့်သည်။ ကာဗွန်ဖြီးအပြင်အမြဲသန့်ရှင်းနေရမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ၀ ိုင်ယာကြိုးကိုကာကွယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောအစီအမံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်Ⅰအမျိုးအစားသုံးပစ္စည်းများ (သတ္တုကိုယ်ထည်) ကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးသင့်ပြီးသူတို့၏အခွံကိုကောင်းစွာခိုင်ခိုင်လုံလုံထားသင့်သည်။
post အချိန်: မေလ -14-2021